K: Mother Rape
to cook someone’s dinner
or turned into guns
the orchids are torn from the trees
clinging with every ounce
of their being, taking bark with them.
photo is credited to Rosalind Tay via Face book.
တစုံတယောက် အတွက် ညစာ ချက်ပြုတ်ဖို့...
သေနတ် အလက်များစွာ ထုတ်လုပ်ဖို့..
သစ်ပင်တွေ အားလုံး .. ခုတ် ပြစ် လိုက်ကြပြီ...။
သစ်ခေါက်တွေ ကို ဆွဲခွါ..
သစ်ခွ အမြစ် တွေ မှာ...
အင်အား ရှိသမျှ.. ကုပ်ကပ် ဖက်တွယ် ထား လျက်..
စုတ်ပြတ်..ကြေမွ...မြေခ ခဲ့ ပြီ။
(မြန်မာလို ပြန်ဆိုသူ - ကေ)
original source - Mother Rape by Kyi May Kaung
Labels: poems , Translation
အဲဒီ ကျန်ခဲ့တဲ့ အငုတ်လေးတွေတောင် စားပွဲဝိုင်း
လုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ အလုအယက် လိုက်ရှာ
တဲ့သူတွေလည်း လိုက်ရှာကြပါတယ် ကဗျာ
အမြစ်ပါယူတာ၊ တရုတ်ကြီးအကြိုက် ရွှေလီကနေပို့လို့ရတယ်
ညစာ မနက်စာ ချက်ဖို့ ... နောက်
သေနတ်တွေ အဖြစ် ပြောင်းလည်း လိုက်ဖို့ .. ပြီးတော့
ငါရဲ့ ထိုင်ခုံ အမြဲတောက်ပြောင်ခိုင်ခံ့နေဘို့ .. အဲဒီ သစ်(ပင်)တွေ .. (ငါ)လိုတယ် ..